Seeskah Hiddada Soomaalida | buug.ga
15/05/2020 Muuse Galaalmaamul
The Basic Traditional Education in Somalia – Somali Version
Degmo idil dad maal yaal ninkii, dux iga soo moodey,
Saddex hal wayga maan dedan,
Bakhayl nin maaha. – Maxamuud Cali Qablax
Beenlow waa fallalow. – Hiddo, Cabdullaahi Qarshi
Haddii murti kale oo ku saabsan Islaamka loo baahdo, ha la dhigto:
Gabayga Salaan ee ka bilaaba, “Cabdiyow wadeeciyo adduun, way ka bixiqaaye.”
Gabayga Cismaan Sharmaake ee ka bilaaba, “Isinka Allaa…”
Gabayga Sayid Maxamad ee ka bilaaba “Nin Ilaah yaqaan oo sharciga…”
WAX-SHEEGNIMO (Being an Expert)
Dab-shid, (Dab-tuur, Nanriish , Kalaguur, Is-tun)
Dab-shid ilaa dab-shid – 365 habeen
(Always 1st to 4th August)
Axal: og, war xaggee cirka axashiisu fadhidaa sannadka?
Sabbuux jimce laba ka weydaa wankaa-qaladle.
Diin iyo dameer-qalad.
Toddob, ama Hubar Adhi
Daydo, Amminla ama ceel-ka-geeye
Seerma-weydo, Sammuulad ama Fushade
1. Dhirta dhiigga joojisa: (Anti-Hemorrhage plants and medicine)
Jalcelo ama salalmaki: Geedkoo dhan baa la karshaa biyihiisa inta la shaandheeyo la cabbaa.
Xabag: Hadi biyaa xabagta lagu qooshaa, dabadeedna inta la shaandheeyaa la cabbaa. Dabeedna calooshaa baxda kaadiduna waa badataa dabeed kalyahaa safooba.
Dacar-biyoodda: Nakhligeeda yar ee markaa soo baxay oo loo calaashado oo biyo lagu qooshayna biyeheedaa la cabbaa.
Geedkase ugu xoog weyn waxaa la yidhaa Bogox-u-jeed, badhidiisaa la cunaa , dabeedna caano dhayaa laa dhamaa.
Badhi idaad oo la cabo.
Tiiraha oo la karsado.
Gaggaboodka oo isagana xididkiisa la tumoo la karshoo inta la shaandheeyo sida shaaha loo cabo.
Subagga gorayda oo la cabbo.
← Wax ii Sheeg	Aqoondarro Waa u Nacab Jacayl →